9 nooc oo ah nooca Pinturillo ee loogu talagalay Android | Androidsis
Ku xirnaanshaha in ka badan laba bilood guriga ayaa u adeegay in waqti badan la qaato deegaanka qoyska, marka lagu daro waqti badan oo loo huro xilliyada firaaqada. Qeyb ku soo kordhay waqtigaas waa tan ciyaaraha mobilada, gaar ahaan kuwa saacadaha iyo saacadaha lagu ciyaaro.
Nooca iskaashigu wuxuu fuulayay jagooyin, isaga oo ka dhigaya mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan 'Pinturillo', cinwaan kaas oo lagu qiyaasayo ereyada iyada oo loo marayo sawirro lagu daro dhibco. Xilligan waxaa jira waxyaabo badan oo beddel ah, markaa waa suurtagal ka hel ciyaaraha Pinturillo nooca Dukaanka Play.
1 Sawir Wax Caadi ah
2 Waydiisay 2
5 Isku Aadka iyo Qiyaasta Multiplayer
6 Qoraalka: Multiplayer Online
7 Isku aadka Farxad leh
8 Isku Aadka
9 Sawir hadda
Sawir Wax Caadi ah
Waxay beddel u ahayd Pinturillo labadeeda qaybood muddo dheer. Sawir Waxyaabaha Caadiga ah waa ciyaar bulsheed aad ku sawireyso oo aad ku qiyaaseyso sawirada matalaya ciyaartooyda. Waa hagaagsan tahay haddii aad rabto inaad la ciyaarto jawiga qoyskaaga kuugu dhow, iyo sidoo kale saaxiibbadaada iyo xitaa dadka ka imanaya geesta kale ee adduunka.
Isku Aadka Waxyaabaha Caadiga ah waxaad leedahay mashiinka kaa caawinaya maxaa yeelay haddii aad ku dhegto adoo maleynaya mid ka mid ah ereyada, oo ay isticmaali karaan dhammaan ciyaartoydu. Tan wuxuu ku darayaa inuu awood u leeyahay inuu wax ku sawiro madow madow ee nolosha oo dhan iyo palette midabyo leh oo lagu hagaajinayo sawirka.
Farsamoyaqaannada cayaartu way isweydaarsanayaan, waad la tartami kartaa asxaabtaada oo waad iska sii hor joogi kartaa, dhammaantood illaa intaad fiiqan tahay si aad ereyga saxda ah ugu hesho sax. Cinwaanka waa la cusbooneysiiyaa si aad u badan, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso markasta oo midkood yimaado si aad uhesho nooca ugu dambeeya.
Waa ciyaar bilaabatay in ay soo baxdo iyadoo la soo saaray noocii ugu horreeyay qiyaastii 8 sano ka hor (oo la bilaabay 2013). Cinwaankan caanka ah waa inaad ku muujisaa aqoontaada ku saleysan su'aalaha, kumanaan fara badan oo kala duwan oo kaamil ah inaad la baashaaldo qof kasta oo saxiixa inuu ciyaaro.
Markaad ciyaarto, waxaad soo ururin doontaa astaamaha kala duwan ee la heli karo, isbarbar dhigga iyo ku guuleysiga abaalmarinnada dhammaan cayaaraha. Waxaad ku qaadan kartaa saacado madadaalo ah, hagaajinta qaybaha kala duwan kaas oo diiradda saaraya ciyaar ka mid ahayd kuwa ugu soo dejinta qaybteeda.
Muusiggu wuxuu ku jiraa waqtiga dhabta ah, way kula tartami doonaan oo waxaad haysataa waqti kugu filan oo aad kaga jawaabto haddii aad rabto in laguu tixgeliyo inay ansax tahay, markaa waa inaadan seexan. Taajku waxay kaa dhigi doonaan inaad naftaada sare u saartid khayaanadan ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah oo qiimeynteeda ay tahay 4,4 5tii dhibicood.
Waa ciyaar Pinturillo laakiin gebi ahaanba la cusbooneysiiyay, ugu yaraan taasi waa sida ay tahay marka aad furto oo aad bilowdo u ciyaarista. Gartic.io ayaa kuu oggolaan doonta inaad midba mar u sawirato, adoo maleynaya waxa la sawiray xilligan, taas oo ka dhigeysa qiyaas macquul ah oo sawir leh, sidoo kale waa bilaash.
Gartic.io wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto qolal ay kujiraan ilaa 50 ciyaartoy, tan awgeed casuumaadu waxay ku martay iskuxiraha, oo ay tahay inuu mid waliba xaqiijiyo inuu joogo kooxda. Mawduucyadu aad ayey u kala duwan yihiin, sidaa darteed waxay ka dhigeysaa mid kale muhiim ah haddii aad raadineyso ciyaar la mid ah Pinturillo.
Waa ciyaar fiidiyow oo bilaash ah, madadaalo iyo wanaagba, waa mid ka mid ah kuwa sifeeya hagaajinta Pinturillo, wax suurtagal ah makaanik ahaan. Gartic.io sidoo kale waxaa lagu ciyaari karaa iyada oo loo marayo boggeeda iyada oo aan horay loo soo dejin, oo ku habboon taleefannada, kombiyuutarada, kiniiniyada iyo noocyada kale ee qalabka.
Gartic.io - Sawir, Hagaajin, WIN
Waa ciyaar moobiil ah oo seddex ka mid ah leh, iyadoo xulashada ugu horeysa ay leedahay divuja y male, midka uu adeegsade kastaa raadinayo haddii uu doonayo inuu ciyaaro nooca Pinturillo laakiin nolol badan leh. User ayaa la ciyaari kara saaxiibada ama ka hel kuwa kula tartamaya khadka tooska ah si fudud oo fudud.
Ciyaarta labaad, dadku waa inay kaqaybqaataan iyagoo qoraya ereyga, sawir iyo, si loo dhammeeyo, u-qalmaan waxa kaa soo horjeeda ay sameeyeen. Horeba kan seddexaad waa inaad sameysaa raadinta sawirXaaladdan oo kale, waxay u baahan tahay xoogaa waayo-aragnimo ah oo ku saabsan sawirka, midka ku soo dhowaada sawirka ayaa guuleysan doona.
Astaamaheeda waxaa ka mid ah, LetsDrawit waxay u taagan tahay abuurista qolal mawduuc leh, marka lagu daro awood u lahaanshaha la hadalka dadka ku dhex jira, marka lagu daro awood u lahaanshaha xannibaadda dadka dhibsada. Waqtigan xaadirka ah waa midka ugu yar ee soo dejinta, laakiin waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan.
-LetsDrawIt- ciyaaro sawirro badan
Isku Aadka iyo Qiyaasta Multiplayer
Isku Aadka iyo Qiyaasta Multiplayer waa ciyaar tartan ah inuu la ciyaari karo qof kasta oo ka tirsan deegaanka qoyska iyo asxaabta kala duwan. Intaa waxaa dheer, ciyaarta ayaa siineysa ikhtiyaarka ah in lala xiriiro dadka meel kasta oo ay adduunka ka joogaan, iyagoo awood u leh inay la ciyaaraan dadka ka soo jeeda Japan, Shiinaha, Mareykanka, iyo dhulal kale.
Ciyaartan waxaad awoodi doontaa inaad ku muujiso shaqooyinka farshaxanka ee loo isticmaalo in lagu muujiyo, tanna ku dar awood aad kula wadaagi karto waxyaabaha ay ka kooban yihiin dhammaan kuwa aad la ciyaareyso. Waa ciyaar nooca Pinturillo ah, in kasta oo ay aad u xusuusinayso Qaamuuska, cinwaan kale oo sababay dareen bilowgiisa.
Ciyaartoyda khadka tooska ah waxay noqon karaan 2 illaa 6 ciyaartoy, waxaad awoodi doontaa inaad ku casuuntid dadkaas aad rabto waxa ugu fiicanna waa inaad la baashaashid dhammaantood. Qoraalka ciyaartani waa 3,3 5tii dhibic, mid ka mid ah dhibcaha ugu xun, laakiin waxay leedahay 1 milyan oo soo degsasho ah.
Developer: Ciyaaraha Time Plus Q
Qoraalka: Multiplayer Online
Waa ciyaar la mid ah dhammaan kuwa la soo sheegay, ku qor Pinturillo inaad la ciyaarto qoyskaaga, asxaabtaada iyo dadka ka yimid meel kale oo adduunka ah. Isku xirnaanta runti waa mid dareen leh, tusaale ahaan sawir ku qaadashadu way fududaan doontaa, waxa ugu fiican ayaa ah inaad awood u yeelatid inaad si dhaqso leh u sameyso midka aan caadiga ahayn maadaama ay aad xasaasi u tahay.
Qoraalka qoraalka: Multiplayer-ka khadka tooska ah waxaad ka abuuri kartaa qolal dadweyne iyo kuwo gaar loo leeyahay, kuwii hore waa kuwo hagaagsan haddii aad rabto inaad la ciyaarto dadka ku dhex jira. Kuwa gaarka ah ayaa ku habboon haddii waxa aad rabto ay tahay inay dadku galaan kaliya la yaqaan, tan waxaad u baahan tahay casuumaad ama isticmaal lambar.
Mid ka mid ah awoodaha ayaa ah inuu awood u leeyahay inuu ka ciyaaro khadka qadka, sidaa darteed waxaad fursad u leedahay inaad si gaar ah u sameyso oo aad uga hortagto mid kale adigoo u gudbiya taleefanka iyaga. Qoraalka: Multiplayer-ka khadka tooska ah wuxuu leeyahay qoraal 4,2 ka mid ah 5-ta dhibic, waa mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan dukaanka sababo la mid ah Pinturillo.
Qoraalka: Qaamuuska Khadka Tooska ah ee Ciyaaraha Badan
Isku aadka Farxad leh
In Happy Draw muhiim maahan inaad lahaato qadka internetka Si loo ciyaaro, ciyaartu marba marka ka dambaysa ayay u dhici doontaa, marka hore waxay ku xirnaan doontaa midka ay tahay inuu rinjiyeeyo, kuwa kale waxay isku dayi doonaan inay qiyaasaan. Ereyga furaha waxaa daaha ka qaadi doona processor-ka, sidaa darteed adiga ayay u taal adiga inaad tarjunto dadka kalena ay saxaan.
Isla marka aad haysato wakhti cayiman oo aad ku dhammayso mid kasta oo ka mid ah sawirrada, dhaqso u samee oo samee si ay kuwa kaa soo horjeedaa dhibco u helaan wareeg kasta. Waxaa jira in ka badan 300 heerar, oo lagu daray mid kasta oo ka mid ah shaqooyinka Waa la wadaagi karaa, markaa haddii aad rabto inaad badbaadiso, dhagsii iyaga waana intaas.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan arjiga waa in la heli karo wadar ahaan 10 luqadood oo kala duwan, oo ay ku jiraan Isbaanish, mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan xilligan. Happy Draw wuxuu helayaa qoraal 3,1 ka mid ah 5-ta dhibic, in kasta oo ay taasi jirto waxay ku guuleysatay inay gaarto qaar ka mid ah 500.000 oo soo degsasho ah waxayna rajeyneysaa inay sii socoto sii kordheysa, iyadoo rajeyneysa inay noqoto wax ka badan bedelka Pinturillo
Farxad Farxad leh - Ciyaarta Qiyaasta AI
Waa mid ka mid ah ciyaaraha talaabooyinka qaaday si ay u gaaraan meel sare tanna waxay ku samaynaysaa iyada oo ilaalinaysa tonic-ka cinwaannada kale ee guuleystay. Waxay aad ugu egtahay Qaamuuska, ciyaartaasi waxay ku saleysan tahay waxa ugu weyn, oo ah in loo sawiro inta ka harsan ka qeybgalayaasha inay ciyaaraan.
Khamaarka khadka tooska ah wuxuu ka dhigayaa mid isku dheelitiran, maaddaama taasi ay ka dhigtay mid ka mid ah kuwa ugu cadcad dad badan oo raadiyay beddel wanaagsan oo Pinturillo ah. Ciyaar eray, adoo dadka kale ka dhigaya inay u maleeyaan jawaabaha badan, laakiin leh waqti uu go'aamiyay processor-ka.
Isku Aadka Isku dhaca sidoo kale marka laga reebo taas waxay ku dareysaa awoodda weerarka cadawga waana inaad daciifisaa ilaa aad ka dhameyso, marka adiga ayey noqoneysaa inaad ciribtirto mid kasta oo iyaga ka mid ah. Difaaca ayaa ah weerarka ugu fiican, sidaa darteed way ku habboon tahay in la diyaar garoobo oo la weeraro marka si adag loo baahdo. In ka badan 300 oo erey oo lagu sawiro.
Isku Aadka - Ciyaarta Qiyaasta AI
Ku buuxi sawirro badan intii karaankaaga ah ugu badnaan hal daqiiqo, 60 ilbiriqsi taas oo ah waqtiga ugu badan ee eray walba la kashifi karo. Wareeg kasta wuxuu leeyahay qiyaastii 5 su'aalood, AI waxay wacdaa haddii sawirku u dhigmo mowduuca ugu dambayntiina, eeg haddii aad ku dhammaysato 5-ta sare
Riwaayadaha cusub waxaa ka mid ah inay leeyihiin 9 xaraf oo gaar ah, 9 midab qalin, gunooyin maalinle ah oo loogu talagalay dadka isticmaala VIP iyo ilaa 350 erey oo lagu furo. Waa mid ka mid ah kulamada sida xoogga leh u guuleysanayay, iyadoo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan liiska inkasta oo la helay 3,7 sumcad.
Dhibcuhu wuxuu ka muuqan doonaa sanduuqa mid kastaU feejignow sawir kasta oo xalli haddii aad si muuqata u aragto, haddii kale waxay u egtahay mid la mid ah kuwa kale. Draw Now waa mid ka mid ah cinwaannada lagu heli karo bilaash kuna habboon aaladaha Android, ha noqoto taleefan ama kiniin.
Sawir Hada - AI Qiyaasta Ciyaarta Sawirka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 9 kulan Pinturillo bilaash ah oo loogu talagalay Android
Nomo, habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee lagu maareeyo meheraddaada